Abụ Ọma 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Abụ Ọma 19:1-14
Iwu Chineke na ihe ndị o kere na-agba àmà
“Eluigwe na-akọsa ebube Chineke” (1)
Iwu Chineke zuru okè, na-eme ka mmadụ nweghachi ume (7)
“Mmehie niile m na-amaghị na m mere” (12)
Maka onye na-eduzi abụ. Abụ Devid. 19 Eluigwe na-akọsa ebube Chineke.+ Mbara igwe na-akọsa ọrụ aka ya.+ 2 Kwa ụbọchị, okwu ha na-asọpụta ka mmiri,Kwa abalị, ha na-egosi na ị ma ihe. 3 Ha anaghị ekwu okwu. E nweghị ihe ọ bụla ha na-ekwu. A naghị anụ olu ha. 4 Ma ụda ha* eruola n’ụwa niile,Ozi ha rukwara n’ebe niile mmadụ bi n’ụwa.*+ Chineke amaarala anyanwụ ụlọikwuu n’eluigwe. 5 O yiri nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ nke si n’ụlọ ya na-apụta. Ọ na-aṅụrị ọṅụ ka dike nke ji ọṅụ na-agba ọsọ. 6 Ọ na-esi n’otu nsọtụ eluigwe apụtaGaa gburugburu ruo na nsọtụ nke ọzọ.+ E nweghịkwa ebe okpomọkụ ya na-anaghị eru. 7 Iwu Jehova zuru okè.+ Ọ na-eme ka mmadụ nweghachi ume.*+ Ihe Jehova na-echetara ndị ya bụ ihe e kwesịrị ịtụkwasị obi.+ Ọ na-eme ka onye na-amaghị ihe mara ihe.+ 8 Ntụziaka Jehova ziri ezi. Ọ na-eme ka obi ṅụrịa ọṅụ.+ Ihe Jehova nyere n’iwu enweghị ntụpọ. Ọ na-eme ka anya na-enwu gbaa.+ 9 Ịtụ egwu Jehova dị mma.+ Ọ na-adịru mgbe ebighị ebi. Ihe Jehova kpebiri bụ eziokwu. Ha niile ziri ezi.+ 10 Ha bara ezigbo uru karịa ọlaedo,Karịa ezigbo ọlaedo,*+Ha dịkwa ụtọ karịa mmanụ aṅụ,+ mmanụ aṅụ nke si n’ụgbụgbọ ya na-agụpụtasị. 11 E jirila ha dọọ ohu gị aka ná ntị.+ Onye na-edebe ha na-enweta ụgwọ ọrụ buru ibu.+ 12 Ònye ga-amatali na ya emejọọla ihe?+ Gbaghara m mmehie niile m na-amaghị na m mere. 13 Ekwela ka ohu gị dị mpako.+ Ekwela ka mpako na-achị m.+ Mgbe ahụ, m ga-abụ onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta,+Agaghịkwa m eme mmehie dị oké njọ. 14 Biko, Jehova, Oké Nkume m+ na Onye Mgbapụta m,+Ka ihe m na-ekwu na ihe m na-atụgharị n’uche bụrụ ihe dị gị mma.+
^ O nwere ike ịbụ, “eriri ha ji atụ̀ ihe.”
^ Ma ọ bụ “n’ala.”
^ Ma ọ bụ “na-eweghachi mkpụrụ obi.”
^ Ma ọ bụ “ọlaedo a nụchara anụcha.”
Abụ Ọma 19